Njikwa Ọrụ Enterprise - Motadata
Maka Jiri Okwu Njikwa Ọrụ Enterprise
Mee ka nnyefe ọrụ gafee ụlọ ọrụ gị
Desktọpụ ọrụ Motadata ServiceOps nwere ike inyere gị aka itinye ụkpụrụ ITSM n'ụzọ nwere ike, ahaziri na akpaaka na usoro azụmaahịa ndị ọzọ dị ka HR, akụrụngwa na ndị ọzọ.
Ihe ịma aka Nchịkwa Ọrụ Nhazi
Njikwa ọrụ ụlọ ọrụ adịla ogologo oge ma gafee ọtụtụ mgbanwe n'ime afọ. Site na iwebata teknụzụ ọhụrụ, dị ka IoT na AI, ihe ịma aka ọhụrụ na-ebilite. Ihe ịma aka mbụ bụ idobe ọkwa ọrụ yana mmụba na-achọ ọrụ. Ihe ịma aka ọzọ bụ ịchọpụta ohere ọhụrụ iji melite ogo ọrụ na ahụmahụ maka ndị ahịa. N'ikpeazụ, na ọbịbịa nke ngwaọrụ ndị ọzọ ejikọrọ, ọ dị mkpa ịmepụta atumatu ga-ejikọta nkà na ụzụ ọgbara ọhụrụ a na ọrụ ndị dị ugbu a.
kwenye na akpaaka nwere ọgụgụ isi nwere mmetụta dị mma na akara CSAT ha.
ESM nwere ike inye aka na mgbanwe dijitalụ nke ngalaba ọrụ nkwado niile iji mee ka ndị ọrụ na-arụpụta ọrụ na afọ ojuju mgbe ha na-akwalite nnyefe ọrụ na ibelata mmefu.
Ngwọta Motadata ServiceOps maka njikwa ọrụ Enterprise
Mụbaa arụmọrụ onye ọrụ site n'ịkwalite ohere dị mfe na ọrụ nhazi yana inye ọrụ enweghị nkebi na Motadata ServiceOps
Mee ka arụmọrụ dịkwuo elu site na ọhụhụ na-abawanye na ọrụ dị iche iche
Ndị njikwa azụmaahịa nwere ike iji katalọgụ ọrụ ụlọ ọrụ mee ka onyinye ọrụ dị mfe ma hazie na hazie ozi na ndebiri akọwapụtara.
Ha nwere ike itinye ihe aga-eme na obere ọrụ, kpalite nnabata akpaghị aka nke usoro ọrụ ọtụtụ ọkwa na-akwado, yana nyochaa arịrịọ maka ọchịchị usoro kacha mma.
Akụkọ na dashboard siri ike na-enye nghọta miri emi banyere uru ọrụ ndị a na-enye yana arụmọrụ nke otu nkwado iji jikwaa nrụpụta otu nke ọma.
Welite arụmọrụ site na imepụta ikpe ngwa ngwa & akpaaka na-arụ ọrụ
Ndị na-ahụ maka nka nwere ike hazie ọrụ niile dị iche iche site na katalọgụ ọrụ site na itinye nkọwa ndị dị mkpa site na iji ndebiri ọrụ omenala na itinye ndebiri arịrịọ ọrụ arụgoro mbụ maka imepụta ikpe dị mfe na ngwa ngwa.
Ha nwere ike idowe otu usoro ndekọ iji soro arịrịọ niile na-abata, nkwado na-echere ma nweta nkwalite ọkwa n'ofe usoro azụmahịa niile.
Kwado ndị ọrụ nka ka ha jiri ịdọrọ & dobe usoro ọrụ iji belata mbọ aka aka wee wepụta mkpebi ozugbo.
Mee ka ndị ọrụ na-arụpụta ihe na afọ ojuju site na nkwado ọtụtụ ọwa
Ndị ọrụ nwere ike ịnweta tebụl ọrụ n'oge ọ bụla, site n'ebe ọ bụla na-eji ọwa dị iche iche dị ka ekwentị, email, portal service, virtual agent, ngwa mkpanaaka, na ihe ndị ọzọ.
Kwado ha ka ha chọta mkpebi maka ajụjụ ndị a na-ajụkarị n'onwe ha site na ọrụ onwe ha na-echeghị ka ndị ọrụ nka wepụta azịza.
Ha nwekwara ike ịbanye ma soro ọkwa nke arịrịọ na-enweghị enyemaka ọ bụla sitere n'aka ndị ọkachamara nkwado.
Uru Maka Nchịkwa Ọrụ Nhazi
Motadata ServiceOps na-enyere òtù dị iche iche aka imelite nhazi azụmahịa dị n'ime ma nye ọrụ kacha mma
Ụdị arịrịọ ọrụ arụgoro mbụ
Malite iji ndebiri arịrịọ ọrụ arụgoro mbụ maka HR, IT, Travel, Finance, wdg site na mbọ nhazi kacha nta.
Nweta nhazi modular Motadata ServiceOps, ụdị ahaziri ahazi, usoro, SLAs na ọtụtụ ndị ọzọ na-enweghị koodu ọ bụla.
Motadata ServiceOps ikpo okwu nwere ike ịmalite ma na-arụ ọrụ na nkeji na obere ọzụzụ achọrọ.